युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन कम्तीमा पाँच दिन लाग्ने - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन कम्तीमा पाँच दिन लाग्ने
युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन कम्तीमा पाँच दिन लाग्ने
By पूजा बानियाँ on ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:२९ समाचार
काठमाडौं, ३० फागुन । युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन पाँच दिन लाग्ने भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
फरेन्सिक मेडिसिन विभागसँग सीमित स्रोत–साधन भएकाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएको हो । सबै मृतकको सनाखत गर्न शव महाराजगन्जस्थित फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ ।
फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रा.डा. हरिहर वस्तीले सीमित स्रोत–साधनबीच काम गर्नुपर्ने भएकाले रिपोर्ट आउन केही दिन लाग्ने बताए । विभागमा भएका १३ कर्मचारीले सोमबार रातिदेखि निरन्तर पोस्टमार्टमका लागि नमुना संकलन गरिरहेका छन् ।
डा. वस्तीका अनुसार सोमबार रातिदेखि मृतकको हुलिया र जाहेरीसहितको विवरण बुझ्ने काम भइरहेको छ । विवरण बुझ्ने, पोस्टमार्टम गर्ने र परिवारका सदस्यलाई शव बुझाउने प्रक्रिया भएकाले केही दिन लाग्ने उनले बताए । सबैको विवरण बुझेपछि फरेन्सिक मेडिसिन विभागले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट मृतकका परिवारका सदस्यलाई दिनेछ ।
नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइएका विमानका पाइलट अबिद सुल्तानको पनि मंगलबार मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ५० पुगेको छ । सोमबार अवतरणका क्रममा अनियन्त्रित भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
४० शव पहिचान गर्नै गाह्रो कम्तीमा ४० शव चिन्नै नसक्ने गरी जलेका छन् । सबै भाग जलेकाले कोठी र दागहरू खोज्न चिकित्सकलाई असहज भएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म युएस बंगला एयरलाइन्सका कर्मचारी कुनै प्रमाण लिएर उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरूले विवरण नदिँदा समस्या भएको विभागले जनायो ।